Ihe kpatara Apple anaghị agbanwe na USB-C iji nweta uru | Esi m mac
Ihe kpatara Apple anaghị agbanwe gaa USB-C maka uru
Anyị ekwuola ọtụtụ okwu ma na-ekwu maka ngbanwe nke ọdụ ụgbọ mmiri nke Macs ọhụrụ site na ọdụ ụgbọ USB-C. Enwere uru na ọghọm, nwekwa ọtụtụ uru ndị ọzọ na-akọ site na ndị ọrụ, n'ihe metụtara ntinye nke usoro a.
Otu n'ime arụmụka nke ndị na-akparị nke nsonye a bụ nkatọ nke ụlọ ọrụ ahụ, na-achọ irite uru na mgbakwunye mgbakwunye nke nkwụnye na eriri kwekọrọ na nhọrọ a. Ọfọn, ọ dịghị ihe dị n'ihu site na eziokwu, dị ka anyị ga-ama n'okpuru ihe mere Apple anaghị akwalite ụdị njikọ a.
Otu n’ime ihe kpatara ya bụ na Apple abụghị onye okike nke USB-C, bụ ndị USB Implementers Forum mebere, nzukọ na-anaghị akwụ ụgwọ na oge ahụ, mepụtara Ogwe Nchekwa Uwa Nile laghachi na 1995.
Ọ bụ eziokwu na Apple bụ onye otu USB-Ọ B IFR., ndị na-akwọ ụgbọala USB-C, mana ọbụghị akụkụ akụkụ kachasị mkpa nke nzukọ a. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ndị ọzọ a ma ama nọ n'elu ụlọ ọrụ na-anya ụgbọ ala: anyị na-ekwu maka ya HP, Intel, Microsoft ma ọ bụ onye na-eme mgbawa STMicroelectronics. Ya mere, nnabata nke njikọ a kwadoro site na ndị isi ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ha, ndị na-enweghị uru na enweghị mmasị na ihe ịga nke ọma nke Apple.
Ọtụtụ katọrọ Apple n'oge gara aga, n'ihe metụtara iji teknụzụ nke aka ya, ihe atụ bụ ntinye enwu, mgbe nke ozo mere: USB-C bụ ọkọlọtọ ma yabụ ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike iji ya. Ihe bụ ihe ọzọ, ị pụrụ ịzụta na-eji Gịnị si ọ bụla ika, Apple na-emesi gị zuru ezu ndakọrịta na àgwà nke ihe.
Ihe kpatara ojiji ọ bụ mkpa nke njikọ ahụ na-enye ohere ịchekwa ohere, njikọ na-agbanwe agbanwe, nke nwere ike ịnyefe ike, data na vidiyo site na otu eriri. Na ọnụahịa nke eriri Apple dị elu karịa asọmpi ahụ, na-azaghachi ọrụ azụmahịa, mana anaghị ejedebe ojiji nke eriri nke akara nke aka.
Mmechi Ọ bụ nnabata nke teknụzụ ọhụụ, ọkụ na arụmọrụ dị elu, maka obere mmefu na eriri na nkwụnye. Agbanyeghị, ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju ị nwere ike zụta ihe atụ gara aga, yana ụdị tiketi ndị ọzọ. N'okwu m, aga m etinye nzọ na nke ọhụrụ ka ọ na-enyekwu uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ihe kpatara Apple anaghị agbanwe gaa USB-C maka uru
Akụkọ ndị ahịa agaghị edozi na data enwetara na ule ya na MacBook Pro
Kedu ihe ma ọ bụrụ na Ogwe Mmetụta nke MacBook Pro bụ ink kọmputa?